कमेडी च्याम्पियनमा वि’वाद सिर्जना भएपछि, खबपु फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो भनेपछि… – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कमेडी च्याम्पियनमा वि’वाद सिर्जना भएपछि, खबपु फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो भनेपछि…
कमेडी च्याम्पियनमा वि’वाद सिर्जना भएपछि, खबपु फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो भनेपछि…
मेडी च्याम्पियनको पहिलो संस्करणको विजेता हिमेश पन्त भए संगै खड्ग बहादुर पुनका समर्थकहरुले कार्यक्रम बाहिर विरोधको नाराबाजी सुरु भएको थियो । यस विषयमा कार्यक्रम आयोजक देखि जजहरुले विजेता निस्पक्ष रुपमा भएको जनाएका थिए तर खबपुका समर्थकहरुले कार्यक्रमको वि’रोध गरेका थिए । यहि विषयमा आज खबपु फेसबुक मार्फत छोटकरीमा आफ्नो विचार राखेका छन् । आफ्नो निवास पुगेर फेसबुक लाइभ मार्फत दर्शकलाई धन्यवाद दिंदै खबपुले वि’रोध नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
खबपुले भने, “रियालिटी शोमा हा’र र जित त हुन्छ नै त्यसैले विरो’ध बारे बोल्दिन । जे भयो र यहाँ सम्मको मायालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” खड्ग बहादुर पुनले लाइभ मार्फत आफु चाडै नै केहि नयाँ प्रस्तुतिका साथ दर्शक माझ आउने समेत जनाएका छन् । आफुलाई माया र साथ दिएको कारण यो स्थान सम्म आइपुग्न सफल भएको लाइभ मार्फत बताएका छन् ।
नविल बैंकले गैरकानुनी तरिकाले ऋणीको रकम काट्ने !
नेकपाकै नेताबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई आपत, शीतलनिवासमा उथलपुथल !
फोन आउनासाथ ५० किलोमिटर टाढासम्म औषधि पुर्‍याइदिने स्वास्थ्यकर्मी